संविधान सभाको निवाचन पछि पनि नेपाल छ ।
यो दशैमा म टिका लाउन्न
मलाई आशिष नदेऊ शत्रुलाइ जित्नु भनेर
अहिले आफ्नै दाजु भाइ शत्रु हुदैछन ।
मलाइ खसि किन्न नपठाऊ
म खसि काटेको हेर्नै सक्दिन
आजकाल मधेसतिर मान्छे काट्दैछन।
भो अब मुक्तीनाथ पनि नजाउं
त्यो त अर्कै दैश भैसक्यो
अर्को जिल्लाकालाई आजकाल बाटो छेक्दैछन।
खराब कुरा चर्को बोलेर मुखिया अनि
लोकतन्त्र शब्दकोशमा शब्द थपेर
मान्छेहरु बिद्वान बन्दैछन ।
आमा तिमी पनि स्लोक फेर
टिकामा लोकतन्त्र ल्याउ
संविधान सभाको चुनाब सरेकोले
हामी टिका नलाउं ।
Posted by: nepalean Labels: गीत/ गजल/ कविता
सवै जना संविधान सभा तर्फकुदी रहेको वेला तेस पछिको विषय उठाउन तार्किक हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो त म भन्न सक्दिन तर के सविधान सभा नै नेपाल र नेपालीको अन्तिम लक्ष्य हो र - यस पछि नेपाल को स्थिती के हुने त्यो वारे वेलामै सोच्नु आवश्यक छैन र ? के नेपालमा संविधान सभाले सवै समस्या समाधान गर्न सक्छ ?
सविधानको वारेमा सवैलाई थाह छ । तर कानुन को विधार्थी को नाताले भन्नु पर्दा सविधानले सवै कुरा समेटन सक्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । संविधानको मुल मर्म यसको प्रस्थावनाले वताउने भएता पनि केही नितिगत विषय वस्तु भन्दा अरु सविधान सभाको उदेश्य हुन सक्दैन । मौलिक अधिकार राज्यका सम्रचना को स्वरुप निति र संविधानको वाधा अडचन फुकाउने केही विषय वस्तुमा वाहेक अरुलाई प्रस्तावित संविधानले समेटने अवस्य छैन ।
चाहे संसारको सवै भन्दा सानो संविधान भएको अमेरिका होस वा सवै भन्दा ठुलो संविधान भएको भारत अथवा सविधान नंै नभएको वेलायत , राज्यको मुल कानुन संविधान भन्दा ठुलो प्रतिवद्धता हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो । प्रजातन्त्र पछिको संविधान २०४७ किन सफल हुन सकेन हामीले कहिले सोचेका छैनौन ।राष्टिय स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत र पदिय स्वार्थ रहे सम्म कुनै सविधान पनि दिगो हुन सक्छ भनि म मान्न तयार छैन । यति खेर अष्टिनको भनाइ सान्दर्भिक होला कानुन सम्प्रभुको आदेश हो । वोलीमा जनता र्सव शक्तीमान भनिएपनि केही व्यत्तलीले सत्ता को खेलमा जनताको कुनै औचित्य राख्दैनन । उदाहरुणको लागि धेरै पर नजाउ के २०४६ को जनआन्दोलन को मर्म यति छिटै कुठाराघात होला भनि हामीले सोचेका थियौ र - यस विषयमा पनि लेख्न त मन थियो तर आजको विषयको मुल उदेस्य यो होइन यस वारे पछि लेख्ने छु ।
नेपालको विभिन्न शक्तीमा दल माउवादी राजा जनता जे भनेता पनि वाहृय शक्ती को यो भन्दा ठुलो भुमिका रहेको छ । यहा वाहय शक्ती को वारे कुरा उठाउन छोडने हो भने पनि जनताको नाममा उठेका नेपालमा अहिले सम्म ३ शक्ती छन । प्रजातान्त्रीक शक्तीमा आधारित दल हरु ,राजा अनि हतियार लिइ सधर्षवा क्रान्ती लाई मुल नारा दिने शक्ती । अहिले राजालाई एक्ल्याएर सातदलको गठवन्धन शक्तीलाई मात्र शक्ती को रुपमा व्यख्या गर्नु भविस्यमा ठुलो भुल हुन सक्छ । सविधान सभा ले निमाण गर्ने नया संविधानले राजतन्त्र विहिन नेपाल त वनाउला तर के दिगो शान्ती उपलव्ध गराउला यस वारे सोच्नु आवश्यक छ । खुला सिमाना र २४० वर्षो इतिहासलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ अहिले सम्म कुनै दलले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनको वल नेपाली जनता हो भने पनि राज संस्था जरै वाट उखेल्नु पर्छ भन्ने माउवादीको भनाइ र गर्राई अवस्य मेल खादैन । वन्दीलाई भत्ता दिएको भनि र्सार्वजनिक स्थलमा राजालाई दिएको वजेटको ढाकछोप गरिए पनि वजेट दिन संसदले रोक्ने प्रयत्न गरेर । सम्पति राष्टियकरण गरेका भनि दरवार राष्टियकरण गर्दा आम नेपाली झुकिए झै सवै नेपाली अवस्य झुकिदैन । नोटवाट राजाको तस्विर हटाएको ध्वागं फुके पनि नोटमा हुने पानी छापमा राजाको तस्विर हटेन । अनि जति राजा फाल्ने नारा दिएता पनि संविधान सभाको चुनाव नै हुन नसक्नु अरुको स्वार्थलाई वुझन टाढा जानु पदैन ।
Posted by: happy days Labels: समसामयिक